Thwebula Free CD Ripper 2.0 – Vessoft
Thwebula Free CD Ripper
Free CD kuwebhu – a isofthiwe yakhelwe ukusebenza audio-CD nomculo amafayela. Isofthiwe ikuvumela ukuba kukhishwe amathrekhi okulalelwayo kusuka CD bese ugcine ukuba disk yakho kanzima izinga digital. Free CD kuwebhu kwenza ukuguqula amafayela alalelwayo kuya MP3, WAV, FLAC kanye Ogg amafomethi. Uhlelo ikuvumela ukuthumela isicelo phezu internet kumuntu database nge ibhuku emculweni uthole amagama albhamu, abaculi nezingoma zawo. Futhi Free CD kuwebhu kwenza ukudlala umculo ukwakheka kusukela disk, besebenzisa esakhelwe player audio.
Ukopishe amafayela alalelwayo in high quality
Ukuguqula amathrekhi audio
Ikhono ukuthumela isicelo database umculo amafayela
Amazwana on Free CD Ripper:
Free CD Ripper Ahlobene software:
Converters zomsindo Isofthiwe nokwandisa umthamo MP3-files. Isofthiwe iqukethe module ukuhlaziywa umthamo amafayela alalelwayo ukunquma elilungile izinga sound for the ezindlebeni zomuntu.
Converters zomsindo Ithuluzi Simple ukusebenza ethandwa takhiwo ifayela lokulalelwayo. Isofthiwe ikuvumela ukuhlela futhi kukhishwe amathrekhi audio kusukela kumafayela video.
English, Afrikaans, Українська, Français... Movavi Screen Capture Studio 8.0.2
Development Isofthiwe for game ukuthuthukiswa for the izinhlelo zokusebenza ezahlukene kanye udlala aduduze. Kukhona ukusekelwa 3D ihluzo futhi enamandla izithombe system.